विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाईदै, नेपालमा कति भए प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना ? - Dna Nepal
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाईदै, नेपालमा कति भए प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना ?
२० बैशाख २०७५, बिहीबार ०३:०६
काठमाडौं, बैशाख २० ।
आज मे ३ अर्थात् विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस । नेपालसहित विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाईंदै छ । यो वर्ष विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसमा ‘शक्तिको निगरानी र नियन्त्रणस् सञ्चार, न्याय र विधिको शासन’ नारा दिइएको छ । सन् १९९३ मा संयुक्त राष्ट्र संघको साधारणसभाले घोषणा गरेपछि प्रत्येक वर्ष युनेस्कोको आह्वानमा विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउने गरिएको हो । यस वर्ष दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न स्वतन्त्र र गुणस्तरीय मिडियाको विकासलाई केन्द्रित गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सबैका लागि न्याय, कानुनको शासन, शान्ति र समावेशीताबीचको सम्बन्धलाई उजागर गरी मनाईंदै छ । नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाईंदै छ । नेपाल पत्रकार महासंघले अहिले काठमाडौंको बबरमहलदेखि बानेश्वरसम्म प्रभात फेरि गर्दै छ । महासंघका शाखाको आयोजनामा देशभर विभिन्न कार्यक्रम भइरहेका छन् ।
यसैगरी, नेपाल पत्रकार महासंघले यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनसम्बन्धी ६२ वटा घटना भएको जनाएको छ । महासंघले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पत्रकार गिरफ्तारी १६, बेपत्ता एक, अपहरणरअवरोध ६, आक्रमण १७, दुव्र्यवहार÷धम्की १९ र नीतिगत बन्देजका तीन वटा घटना भएको जनाएको छ । महासंघको तथ्यांकमा यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका सबैभन्दा धेरै घटना प्रदेश नं ३ मा भए भने सबैभन्दा कम प्रदेश नं १ मा भए । महासंघ सञ्चार अनुगमन इकाइको अभिलेखअनुसार प्रदेश नं ३ मा २७ वटा घटना भएका थिए भने प्रदेश नं १ मा तीन वटा घटना भएका थिए । त्यसैगरी प्रदेश नं २ मा पाँच, प्रदेश नं ३ मा नौ, प्रदेश नं ५ मा सात, कर्णाली प्रदेशमा चार र प्रदेश नं ७ मा सात वटा घटना भएका छन् ।